Udokotela Wamazinyo Ophuthumayo | I-OptiSmile Advanced Dentistry eKapa
udokotela wamazinyo ophuthumayo ekapa
Isimo esiphuthumayo samazinyo kungenzeka sibe sibi kakhulu futhi akufanele sizitshwe.
Kwa-OptiSmile, odokotela bamazinyo bakufanelekele ngokukhethekile ukusiza ezimweni eziphuthumayo futhi babuyise ukusebenza ngokushesha nangempumelelo, banciphise ubungozi bokulimala unomphela nokwelashwa okuqhubekayo ngokuhamba kwesikhathi. Uma kunesimo esiphuthumayo, sihlose ukubona isiguli ngokushesha okukhulu futhi sinikezwe izikhundla ezikhethiwe.
Udinga udokotela wamazinyo ophuthumayo?
Uma unesimo esiphuthumayo samazinyo; njengokuqaqanjelwa ngamazinyo, izinyo eliqotshiwe noma elahlekile noma izinto ezinamathele emazinyweni, ungaxhumana ngokushesha nodokotela bamazinyo emigqeni ezinikele kuWhatsApp. Bazokuphendula ngokushesha okukhulu futhi bazokweluleka ngokuthi ungawunciphisa kanjani umonakalo kuze kuhlelelwe i-aphoyintimenti.
Kunemithetho embalwa yesithupha okufanele ilandelwe uma kwenzeka kuba nezimo eziphuthumayo zamazinyo: Uma izinyo selinganakiwe, kufanele uzame ukuligcina linomswakama kuze kube yilapho uqokwa khona - ukulifaka ubisi imvamisa kuyindlela engcono kakhulu. Uma unezinyo eliqhephukile noma elisikiwe, hlambulula umlomo ngamanzi afudumele ukuze uligcine lihlanzekile bese ufaka icompress ebandayo ukunciphisa ukuvuvukala. Izinyo lamazinyo lingakhombisa inkinga ebucayi yamazinyo ngakho-ke kubalulekile ukuhlela isikhathi sokubonana nokuthi indawo ethintekile ihlolwe kahle. Ungafaki i-aspirin ngqo emazinyweni noma ezinsinini, kodwa hlanza indawo ngamanzi afudumele njalo ukuze uyigcine ihlanzekile uze ukwazi ukusibona. Into engcono kakhulu ongayenza uma kunesimo esiphuthumayo samazinyo ukusivakashela lapho sisebenza khona eSea Point. Izimo eziphuthumayo zamazinyo akufanele zithathwe kalula, futhi odokotela bamazinyo bethu abaqeqeshwe ngokukhethekile bazokusiza uthole imiphumela emihle ngokukusiza ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze umonakalo unciphiswe.
Ngokuthinta Okunomusa Nokukhathalela.
Siyazethemba kakhulu emsebenzini wethu ukuthi sinikeza isiqinisekiso senkonzo yeminyaka emi-5 kokugcwaliswa nokubuyiselwa kwe-ceramic. Konke okudingeka ukwenze ukulandela imiyalo yokunakekelwa ngemuva kokuya ekuhlolweni kwakho okuhleliwe, kabili ngonyaka nokuhlanzwa e-OptiSmile.
Ukulimala Emlonyeni Kungenzeka Kube Kubucayi Kakhulu Futhi Akufanele Kunganakwa
Kwa-Optismile, odokotela bamazinyo bakulungele ngokukhethekile ukusiza ezimweni eziphuthumayo nokubuyisa ukusebenza ngokushesha nangempumelelo, ukunciphisa ubungozi bokulimala unomphela nokwelashwa okuqhubekayo ngokuhamba kwesikhathi. Uma kunesimo esiphuthumayo, sihlose ukubona isiguli ngokushesha okukhulu futhi sinikezwe izikhundla ezikhethekile.
Kwa-OptiSmile high tech, odokotela bezimonyo eKapa, ​​sikholelwa ekulondolozeni amazinyo akho nasekuwathuthukiseni ukuthi akhiphe ukumamatheka okuqinile, okuqondile, okumhlophe nokuzethemba okukhulu. Siyazethemba emsebenzini wethu ukuthi sinikeza isiqinisekiso senkonzo yeminyaka emi-5 ekufakweni nasekuvuseleleni ngobumba. Okudingeka ukwenze ukulandela imiyalo yokunakekelwa ngemuva kokuya ekuhlolweni kwakho okuhleliwe, kabili ngonyaka nokuhlanzwa e-OptiSmile.